LG အကြောင်းသတင်းများ - ပစ်လွှတ်ခြင်း၊ မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်၊ အမြစ်နှင့်အခြားအရာများ - Androidsis | Androidsis
LG ကိုရည်ညွှန်းသောအခါအရည်အသွေးမြင့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အမြောက်အများကိုအမြဲတမ်းသတိရလာသည်။ LG သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည့်အတွက်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ တီဗွီ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့်စမတ်နာရီများကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အီလက်ထရွန်းနစ်ကဏ္inမှကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးသည် LG ထုတ်ကုန်များ၏အဓိကအရာဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများသည်သူတို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုတို့အတွက်ထင်ရှားသည်။ ဤကဏ္တွင် LG ဖုန်းများ၏သတင်း၊ အချက်အလက်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကို Android နှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်အဖြစ်တွေ့နိုင်သည်။
၀ ယ်သူများမရှိခြင်းကြောင့် LG သည်မိုဘိုင်းဌာနခွဲကိုပိတ်ပစ်ရန်စီစဉ်နေသည်
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
ဇန်န ၀ ါရီလကအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည့်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG ၏အနာဂတ်အစီအစဉ်များအကြောင်းကိုလပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခဲ့ကြရသည်။
Android 11 သည် LG V60 ThinQ 5G သို့အသစ်ဖြန့်ချိလိုက်သည်
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
Android 11 သည်စမတ်ဖုန်းများပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဤအချိန်တွင် LG V60 ThinQ 5G ၏အလှည့်သည် ...
LG W41 ကိုသူ့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်တွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
LG W31 နှင့်အတူ၎င်း၏ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောမူကွဲဖြစ်သော W31 + ကိုနို ၀ င်ဘာလတွင်ရောင်းချခဲ့သည်။
LG Velvet 5G သည် Android 11 Stable Update ရရှိမည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မေလက Snapdragon 765G နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏မျှော်လင့်ရဆုံးဖုန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
LG သည် Bing ကို ၀ ယ်သည့်ကုမ္ပဏီ Vingroup ကိုဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်သည်
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ LG က၎င်းကိုရောင်းချရန်စီစဉ်နေကြောင်းကောလာဟလများစတင်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင် LG သည်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်။ သော်လည်း ...
LG Rollable သည်လက်တွေ့ကျပြီးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကပထမဆုံးအကြိမ်ပြသသည်
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
အကယ်၍ LG ကထိုထူးဆန်းသော LG Wing ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအံ့အားသင့်စေခဲ့လျှင်၎င်းသည် LG Rollable ကိုပြသခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပန်းထိုးခြင်းဖြစ်သည်
LG W11, LG W31 နှင့် LG W31 + တို့ကိုကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားသုံးခုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
LG သည် ၂၀၂၀ တွင်၎င်းကိုဝယ်ယူရန်စီစဉ်ထားသောဖုန်းအသစ်များကိုတင်ဆက်မှု၏ကောင်းသောစည်းချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
LG Q52 သည် Helio P35 နှင့် Android 10 တို့ဖြင့်စတင်ရောင်းချသည်
LG က Q52 သစ်ကိုမကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် LG K52 နှင့်အလွန်ဆင်တူသည့် K52 အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
LG K62 နှင့် LG K52 တို့ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်များနှင့်နောက်ကင်မရာလေးခုအထိရှိသည်
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
LG ကုမ္ပဏီသည် LG အမည်များအောက်တွင် K ဖုန်းသို့ထည့်ရန်ဖုန်းအသစ်နှစ်လုံးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
LG Q31 သည် Helio P22 နှင့် Android 10 ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
လွန်ခဲ့သောတစ်လနီးပါးက LG K31 ကိုကြေငြာပြီးနောက် LG မှ entry-level ဖုန်းအသစ်ကိုကြေညာခဲ့သည်။
သင်၏ LG G6, LG G5, LG V20 အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုအခမဲ့ download လုပ်ရန်
LG G3 ကို Android 7.1.2 (နိုင်ငံတကာပုံစံ D855) သို့မွမ်းမံနည်း။
LG G4 ပြproblemsနာနှင့် ၄ င်းတို့၏ဖြေရှင်းနည်းများ
တကယ့်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ LG G6
LG G3 ပြProbleနာများ - Root မရှိပဲ LG G2 စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း ၂ ချက်
LG G2 ကို Android 7.1.1 သို့မွမ်းမံနည်း။ (မော်ဒယ် D802)
သင်၏ LG ၏ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း၊ LG G5, LG G4 နှင့် LG V10 အတွက်သင့်လျော်သည်
Android3Marshmallow ပါသော LG G6.0 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Recovery and Root ရှိသည်
LG G5 သည်၎င်းကိုအသံတိုးတက်စေရန်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော module တစ်ခုဖြစ်သည်
LG V10 ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ Phablets ဟုခေါ်သည့်ဖုန်းများထဲတွင်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။
LG G3 International ကို Android 6.0 တရားဝင် LG Poland Firmware ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နည်း
LG G4 ပေါ်ရှိပြနာများ - တို့ထိတဲ့ touch screen ကမတုံ့ပြန်ဘူး
မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ထားရန်နှင့် LG G2 ပေါ်ရှိနှစ်ချက်ပုတ်ကိုပြန်လည်ရယူရန်
သင်၏ LG G2 ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဥရောပ firmware D80220H သို့မွမ်းမံရန်
Nexus6နှင့် LG G3 နှိုင်းယှဉ်ချက်
LG G2: မြန်မြန်ဆန်ဆန် Remote ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်နည်း Android POS Android
LG G3 Stylus၊ ဤစမတ်ဖုန်းကိုဗွီဒီယိုတွင်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များသို့ကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်
LG G3 နှင့်မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်း
LG G3 ကီးဘုတ် (Root and Recovery အသုံးပြုသူများအတွက်သာ) ကူးယူပါ။